“छ माया छपक्कै’ बामपन्थी फिल्म हैन”
By soniya on	 25th September 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
दीपेन्द्र लामा निर्देशित तेस्रो फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ २४ असोजदेखि प्रदर्शन हुँदैछ । समिक्षक समेत रहेका लामाले यसपटक छक्का पञ्जा टीमसँग सहकार्य गरेका छन् । ट्रेलर रिलिजपछि सिर्जित दर्शकीय प्रतिक्रियाबीच लामाले मूभिमान्डुसँग फिल्म, बुझाइ र अन्य आयाममा रहेर कुरा गरेका छन् । अन्तर्वार्ता पढ्नूस र कमेन्ट गर्नूस :
ट्रेलर रिलिजपछि मिश्रित प्रतिक्रिया छ । दर्शकलाई ‘छ माया छपक्कै’ के हो भनेर बुझाउनुहुन्छ ?
छक्का पञ्जा फ्लेवर नआओस् भनेर सुरुदेखि नै विचार गरेका थियौं । यसो भन्दैमा कमेडीलाई बेवास्ता पनि गर्न सकिन्न । अलिअलि कमेडी पनि फिल्ममा समावेश गरेका छौं । यसमा नायक र नायिका फरक राजनीतिक आस्था बोकेको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् । राजनीति प्रेममा बाधा भएर खडा भएको छ । सोसल इस्यु पनि गोप्यरुपमा समावेश गरेका छौं जुन कुरा ट्रेलरमा सार्वजनिक गरिएको छैन । फिल्मको खास इस्यु के हो भन्ने बारे रिलिजको एकदुई दिन अगाडि पनि सार्वजनिक गर्न सक्छौं ।
बजार, दर्शकीय अपेक्षा र छक्का पञ्जा टीम । यी तत्वसँग काम गर्दा कत्तिको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?
छक्का पञ्जा ४ नबनोस् भनेर म सुरुदेखि नै सचेत थिएँ । चुनौति के छ भने, छक्का पञ्जा सिरिजभन्दा यो फरक हुनैपर्छ । छक्का पञ्जाको ब्यापारिक कीर्तिमानको हारहारीमा पुग्नुपर्ने चुनौति पनि छ । निर्माता रोहित अधिकारीले नाफा कमाउन भन्ने उद्देश्य छ । व्यापारिक कीर्तिमान नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने जिद्दिपनि चाहिँ छैन ।
फिल्मको विषयवस्तु र प्रदर्शनको समयले गर्दा वृहत दर्शकमाझ लैजानको लागि कत्तिको चुनौतिपूर्ण छ ?
मासमा फिल्म लैजानको लागि दीपक, दीपा, मुन्द्रे, माग्ने बुढा हुनुहुन्छ । उहाँहरु अहिलेका पपुलर सेलेव्रिटी । मास अपिलिङ उहाँहरुमा छ । यो दीपेन्द्र लामाको मात्र फिल्म हैन, हाम्रो पनि हो । दीपक–दीपाको जुन ब्रान्ड छ, त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ । छक्का पञ्जा विगतमा दशैंमा रिलिज भयो र तिहार पनि क्रस गरेर गयो । मेरो तर्क चाहिँ, फिल्म राम्रो भयो भने टीका पर्सिपल्ट रिलिज गरेपनि चल्छ । दर्शकले माइन्ड–मेकअप गरेको हुन्छ, यो फिल्म हेर्छु भनेर । ट्रेलर र गीत आइसकेपछि धेरैले एकपटक हेर्छु भनेर मनस्थिती बनाइसक्नु भएको छ ।
दीपक–दीपासँग काम गर्दा कति सिर्जनात्मक सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिती आयो तपाइँलाई ?
फिल्म मेकिङ भनेको टीमवर्क हो । ‘घामपानी’ र ‘गोपी’मा काम गर्दापनि त्यो अनुभव मलाई थियो । छ माया छपक्कैमा अझ ज्वलन्तरुपमा टीमवर्क भएको छ । यसमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने किसिमले कोही पनि आफ्नो अडानमा रहेन । सबैजना सफ्ट भए । म पनि नरम भएँ । फिल्म हेरिसकेपछि सामाजिक मुद्दाप्रति गम्भिर भएर दर्शक घर फर्कियोस् भन्ने पक्षमा हाम्रो पहल थियो । सिर्जनात्मक सम्झौता भन्ने कुरा फिल्म गर्दा हुन्छ । पुस्तक लेख्दा हुँदैन । सबैजनाले साझा धरातलमा उभिएर फिल्म बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
द्धन्द्ध र राजनीतिको कथा यो विन्दुमा आएर भन्नुपर्ने जरुरी किन देख्नुभयो तपाइँले ?
पहिलो कुरा त, यसमा द्धन्द्धको कथा छैन । कथामा प्रमुख तत्व राजनीति रह्यो । घामपानीमा अन्तरजातिय र गोपीमा कृषकहरुविरुद्धको नीति समस्या थियो । यसमा राजनीतिक आस्था अवरोध छ । नायक एउटा राजनीतिक आस्था राख्ने र नायिका अर्को । उनीहरुको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी पनि देखाउनुपर्ने भएकाले ०४६ साल अगाडिको बामपन्थी आन्दोलन देखाएका हौं । ट्रेलरमा त्यस्तो लाग्छ सक्छ तर बामपन्थी फिल्म चाहिँ हैन फेरी । तर नायक बामपन्थी छ । पल्टिकल ड्रामा भन्न मिल्दैन ।
अप्रोचहरु नयाँ के छ फिल्ममा ?
गम्भिर विषयलाई कथा बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकले गाम्भिर भएर महसुस हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । दीपक–दीपाको मान्यता चाहिँ दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउनुपर्छ । उहाँहरुको मनोरञ्जनको प्यार्टन भनेको कमेडी हो । यी दुई पक्षको यसमा फ्युजन छ । कमेडी र सामाजिक गाम्भिर्यता पनि जोडिएको छ । यसको मिश्रण थाहा पाउन पनि फिल्म हेर्नुपर्छ ।
‘छ माया छपक्कै’पछि तपाइँले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
मलाई टीनएजर्स लभस्टोरी फिल्म बनाउने इच्छा छ । कन्सेप्ट पनि तयार छ । कलाकारहरुको अभावले गर्दा ढिला भएको हो । निर्मातले नयाँ कलाकारलाई विश्वास गर्नुहुन्न । चलेको कलाकार लिऊँ भने उहाँहरुको टाइम छैन । लगत्तै दयाहाङ राईलाई लिएर एउटा फिल्म बनाउँछु होला । मौखिकरुपमा सम्झौता चाहिँ भैसकेको छ । छ माया छपक्कैको रिलिजपछि मात्रै विस्तृतरुपमा काम अघि बढ्छ ।